पुँजी बजारमा हल्लाको खेती – Sourya Online
नरेन्द्रमान श्रेष्ठ २०७८ साउन १३ गते ६:५७ मा प्रकाशित
डा. युबराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको थियो भने डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले सेयर बजारलाइ जुवाको संज्ञा दिएका थिए । त्यसबेला सेयर बजारमा पहिरो नै गएको थियो । डा.खतिवडालाई लगानीकर्ताहरूले त्यति मन पराउँदैनथे ।
सेयर बजारमा विभिन्न हल्लाहरूले प्रभाव पार्ने गरेका हुन्छन् । कहिले बैंकहरूको मर्जर हुने हल्लाले, कहिले सरकार परिवर्तनको हल्लाले, कहिले अर्थमन्त्री परिवर्तनको हल्लाले, कहिले नेप्से घट्ने बढ्ने हल्लाले सेयर कारोवारमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सेयर बजारका लगानीकर्ता विश्लेषक भन्नेहरूले सेयर बजारलाइ आफ्नो अनुकूल पार्नका लागि फैलाउने हल्लाले ठूलो प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समयमा त बैंकहरूबीच मर्जरको र एक्वाएरको हल्लाले गर्दा सेयरको मूल्यमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । नेपाली लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा चल्ने गरेका हल्लाहरूबाट छिटै प्रभावित हुने गरेका छन् । हुन त संसार नै हल्लाले हल्लाउँछ भनेर पनि भन्ने गरिएको छ । सायद यही कारणले होला बेलाबेलामा सेयर बजारमा पनि विभिन्न हल्लाहरू हुने गरेका छन् । सामाजिक संजालहरूमा केही अनलाइन मिडियाहरूबाट आपूmलाइ सेयर बजारका विश्लेषक भन्ने ज्योतिषीहरूले सेयर बजारलाई हल्लाइरहने गरेका छन् । केही सेयर बजारका विश्लेषक भन्नेहरूले नेप्से यति बढ्छ, नेप्से यति घट्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने गरेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरू यस्तो भविष्यवाणीको प्रभावमा पर्ने पनि गरेका छन् । कतिपय सरोकारवालाहरू सेयर बजारका विश्लेषक भन्नेहरूले सेयर बजारको बारेमा नेप्सेको घटबढको बारेमा भविष्यवाणी गर्न नहुने बताउँछन् । नेप्से घट्ने, बढ्ने भनेको सेयर बजारको बिउटिनेस नै हो । नेप्से भनेको सधँै बढ्ने मात्र, सधँै घट्ने मात्र भई रहँदैन । सेयर बजारलाई आफ्नै लयमा चल्न दिनुपर्छ ।
लगानीकर्ताहरू मात्रै होइन नियामक निकायहरू समेत यही हल्लाको प्रभावमा पर्ने गरेका छन् । मन्त्री हुनेहरूले समेत सेयर बजारबारे लगानीकर्ताहरूमा भ्रम पार्ने अभिव्यक्तिहरू दिने गरेका छन् । आपूmलाई सेयर बजारका खेलाडी ठान्ने लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारलाई अर्ध जुवा भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएकाहरूले पनि बेलाबेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको थियो भने डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले सेयर बजारलाई जुवाको संज्ञा दिएका थिए । त्यसबेला सेयर बजारमा पहिरो नै गएको थियो । डा. खतिवडालाई लगानीकर्ताहरूले त्यति मन पराउँदैनथे । पछिल्लो समयमा पनि सेबोनका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले १० कित्ते नीतिले सेयर बजारको प्राथमिक बजारमा विकृति ल्याएको र यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका थिए । यसले पनि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा भ्रम सिर्जना गरेको थियो । के १० कित्ते नीतिले सेयर बजारको प्राथमिक बजारमा विकृति ल्याएकै हो त ? के सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र हो त ? के सेयर बजार अर्ध जुवा, जुवा नै हो त ? यस्ता भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति गर्दा पनि सेयर बजारमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । यसबाट लगानीकर्ताहरूमा अन्योलता बढ्ने गरेको छ । सेयर बजारमा चल्ने गरेको हल्लाको पछि लागेर कतिपय लगानीकर्ताहरूले नोक्सानी बेहोर्न परेको छ । केही सीमित लगानीकर्ताहरूले हल्लाको खेती गरेर लाभ पनि लिने गरेका छन् । सामान्यतया सेयर बजार भनेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पुँजीको जोहो गरिदिने माध्यम हो ।
सेयर बजारलाई हल्लाले प्रभाव पारेजस्तै राजनीतिले पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ । देशमा राजनीतिक खिचातानी, राजनीतिक उथलपुथलले पनि सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । सरकारसँगै अर्थमन्त्रीको बारम्बार परिवर्तनले पनि सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । विगतको अस्थिर सरकारको गतिविधिले पनि देखाइसकेको छ । सरकारको स्थायीत्व र देशमा शान्ति सुव्यवस्थाले पनि देशमा लगानीको बातावरण बन्ने गर्छ नै तर पनि सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको सरकारको स्थिति हेरेर गर्ने भन्ने पक्कै होइन । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको आपूmले लगानी गर्ने कम्पनीहरूको पर्फमेन्सलाई हेरेर गर्ने हो । तैपनि पछिल्लो समयमा भने निषेधाज्ञा भए पनि, सरकार परिवर्तन भए पनि, राजनीतिक खिचातानी भए पनि, सेयर बजारमा भने त्यति असर गरेको देखिएन । निषेधाज्ञाको समयमा पनि सेयर बजारमा चमक देखिएको थियो । सेयरबजारमा तहल्का मच्चिएको देखियो । यो सेयर बजारका लागि सकारात्मक हो ।
के त अब सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू परिपक्क भएका हुन त ? तैपनि कतिपय लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञानलाई नियाल्दा बजारमा हुने उतारचढावलाई हेरेर लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसो त कतिपय लगानीकर्ताहरू चाँडै नै हल्लाको प्रभावमा पर्ने हुनाले केही ठूलाबडा व्यापारीहरूले सेयर बजारमा हल्लाको खेती गरेर चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ । केही समय अघि विभिन्न बैंकहरूको नबिल बैंकसँग मर्ज हुने हल्ला चलाएर सेयरको मूल्यमा तलमाथि पारिएको देखियो । यसमा केही अनलाइन मिडियाहरूले पनि सत्यतथ्यको जानकारी नै नलिई हल्लाको भरमा समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको र कतिपयले सामाजिक संजालहरूमा पोस्ट गरेको पनि पाइयो । कसैकसैले हल्लामा पनि लाभ लिने गरेका हुुन्छन् भने अधिकांश लगानीकर्ताहरू भने फस्ने गरेका छन् ।
लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारको बोरमा जानकारी लिन जरुरी छ । आपूmले लगानी गर्ने कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी लिन, कम्पनीको आर्थिक सूचकहरूको कार्यशीलता बुझ्न, कम्पनीको प्रतिवेदन, प्रतिसेयर आम्दानी, रिजर्भ, पिइ रेसियो आदिको अध्ययन गर्न जरुरी छ । रिजर्भ राम्रो भएको, प्रतिसेयर आम्दानी बढी भएको, पिइ रेसियो कम भएको कम्पनीले नियमित रूपमा लाभांश दिने भएकाले यस्ता कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा राम्रो हुने जानकारहरू बताउँछन् । सेयर बजारमा सर्ट टर्म मिड टर्म र लङ टर्म लगानीकर्ता रहेका हुन्छन् । सर्ट टर्मका लगानीकर्ताहरूले छोटो अवधिमा नै लाभ लिनको लागि बढेको कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने गर्छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरू सेयर बढेको बेला बजारमा इन्भेस्ट गर्छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरू भने घटेको बेला सेयर खरिद गरेर बढेको समयमा बिक्री गर्ने गर्छन । त्यसैगरी कतिपय लगानीकर्ताहरू प्राथमिक बजारमा लगानी गरी बढेको बेला सेयर बेच्ने पनि गर्छन् । दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूमा जोखिम हुने गर्छ भने प्राथमिक बजारमा जोखिम कम हुन्छ । यस कारणले पनि नवप्रवेसी लगानीकर्ताहरूले प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने गर्छन् । चाहे प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरू हुन वा दोस्रो बजारका, लगानीकर्ताहरूले हल्लाको पछि नलागी अरूको देखासिकी नगरी सेयर बजारसम्बन्धी जानकारी लिई आपूm सजग सचेत भइ सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्दछ ।